जाजरकोट झडपमा बेपत्ता भएका एक जनाको शव फेला पर्र्यो, नदीमा हाम फालेकाहरूलाई पनि ढुंगामुढा प्रहार भयो घाइतेको बयान – कदर न्यूज अनलाईन डिजिटल पत्रिका : Oneline Digital Kadarnews:
जाजरकोट झडपमा बेपत्ता भएका एक जनाको शव फेला पर्र्यो, नदीमा हाम फालेकाहरूलाई पनि ढुंगामुढा प्रहार भयो घाइतेको बयान
प्रकासित : १४ जेष्ठ २०७७, बुधबार
जेठ १४, काठमाण्डौ । हालै मात्र जातीय झडपबाट बेपत्ता भएका तीन जना मध्यका एक जनाको शव जाजरकोटको भेरी नदीमा फेला परेको छ ।
भेरी नगरपालिकाका लोकेन्द्र सुनारको शव कुदु भन्ने नदीमा तैरिएको अवस्थामा गोताखोरले फेला पारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका प्रहरी प्रमुख डिएसपी किशोर श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।
रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ८ सोती गाउँका स्थानीयले लखेटेपछि ज्यान जोगाउन भेरी नदीमा हाम फालेकामध्ये सोमबार बेलुकी जाजरकोट जिल्लाको भेरी नगरपालिका वडा नं. ४ का का १७ वर्षीय गणेश बुढा मगरको शव फेला परेको थियो ।
घटना भएकै दिन शनिबार राति १० बजेतिर केटी लिन भनेर सोती गाउँ पुगेका सोही ठाउँका २१ वर्षीय नवराज विकको र रुकुम पश्चिम जिल्लाको चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. १ का २० वर्षीय टीकाराम सुनारको शव आइतबार बिहान सानी भेरी नदी किनारमा फेला परेको थियो ।
गत शनिबार बेलुका ५ बजेतिर मल्ल थरकी केटीलाई भगाएर ल्याउने भन्दै मृतक नवराज विकले थप १८ जना साथी लगेर रुकुमपश्चिमको चौरजहारी पुगेको समयमा घटना भएको थियो ।
त्यहाँ जानेमध्ये केही युवा सल्यान र बाँके, जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लाका समेत रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
रुकुम पश्चिमका प्रहरी प्रमुख डिएसपी केसीले बेपत्ता युवाहरूको उद्धार र खोजी कार्यका लागि कर्णाली प्रदेशबाट ३० जना थप जनशक्ति आएको जानकारी दिएका
घटना अनुसन्धान कार्यमा सहयोगका लागि संघीय प्रहरी इकाईबाट एक जना प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा थप दुई जनाको टोली पनि यसअघि नै त्यहाँ पुगेको छ ।
गृह मन्त्रालयले पनि मंगलबार घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न भन्दै एउटा समिति बनाएको छ ।
रूकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८ मा शनिबार साँझ भएको एउटा घटनाको अहिले देशैभरि चर्चा छ ।
मल्ल थरकी प्रेमिकालाई भगाउन आएका भेरी नगरपालिका–४ जाजरकोटका नवराज बिक र उनका दुई जना साथीको मृत्यु भएपछि यो घटनासँग नेपाली समाजमा व्याप्त छुवाछुत र जातीय विभेद जोडिएको छ ।
नवराज र १७ वर्षीया ती किशोरीको यो वियोगान्त प्रेम कहानीमा जातपातसँगै अरू कुरा पनि मिसिएका छन् ।
नवराज र किशोरी तीन वर्षदेखि प्रेममा थिए । यो कुरा उनीहरू दुबैको परिवारलाई थाहा थियो ।
केटातर्फको परिवारलाई पनि पहिल्यै थाहा भइसकेको थियो, आमाले जात नमिल्ने भएकाले अगाडि नबढ्न छोरालाई भन्नुभएको रहेछ,’ उनले भने, ‘केटीतर्फकोले पनि सम्बन्ध बारे थाहा पाएर अलग गराउने चेतावनी दिइरहेका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक किशोर श्रेष्ठले उनीहरूको प्रेम सम्बन्ध बारे पहिला पनि विवाद भएको बताए ।
‘लकडाउन सुरू हुनुभन्दा पहिला पनि बिक चौरजहारीस्थित केटीको घरमा पुगेका थिए । छोरी भागेर जान थालेको थाहा पाएपछि उनका अभिभावकले प्रहरीलाई खबर गरेछन्,’ डिएसपी श्रेष्ठले भने ।
प्रहरीले उनीहरू दुबै जनालाई चौकी ल्यायो ।
केटीको उमेर नपुगेकाले पछि विवाह गर्नु भनेर सम्झाइबुझाइ गरेर पठाइदियो ।
कानुनले तोकेको उमेर पो पुगेको थिएन, उनीहरूले मन भने विवाहका लागि आत्तिसकेको थियो । उनीहरूले फोनमै फेरि भाग्ने योजना बनाए । शनिबार नवराज आफ्ना १८ जना साथीलाई सँगै ल्याएर चौरजहारी आए ।
उनको साथी आएकाहरू गैरदलित समुदायका पनि थिए । तीमध्ये एक गणेश बुढाको सोमबार साँझ भेरी नदीको किनारमा शव फेला परेको छ । बुढा र नवराज छिमेकी थिए ।
नवराज आफ्ना साथीसहित वडामा आएको चौरजहारी–८का वडाध्यक्ष डम्मरबहादुर मल्ललाई कसैले खबर गरिदियो । त्यतिबेला उनी बाहिरबाट आएकालाई राख्न बनाइएको क्वारेन्टिनमा थिए । उनले साँझ पाँच बजेतिर आफूले यो खबर पाएको बताए ।
‘लकडाउन कार्यान्वयन गर्न हामीले एक वडाबाट अर्को वडामा जान बन्द गरेका बेला जाजरकोटबाट ठूलो समूहमा युवाहरू आएको सूचना मैले इलाका प्रहरी कार्यालयलाई दिएँ,’ वडाध्यक्ष मल्लले भने,‘तर प्रहरी समयमा आएन । गाउँमा पुगेर उनीहरूले केटीकी आमासँग भनाभन गरेछन् ।
त्यसपछि क्वारेन्टिनबाट आफू गाउँ गएको उनले बताए ।
‘औल भन्ने ठाउँमा पुग्दा गाउँलेहरूले युवाहरूलाई लखट्दै आएको भेट्टाएँ । त्यतिबेला झन्डै साढे पाँच बजेको थियो । ५ मिनेटपछि प्रहरी पनि सोही ठाउँमा पुग्यो,’ उनले भने ।
गाउँलेहरूले १२ जना युवालाई नियन्त्रण लिएर राखेका थिए । ती सबैलाई प्रहरीको जिम्मा लगाए ।
पहिला पनि आएका नवराज फेरि दलबलसहित आएको देखेपछि केटीकी आमा ‘दलितको छोराले हाम्री छोरी भगाउन लाग्यो’ भन्दै कराइछन् ।
‘युवाहरूले उनको कुरा सुनेको नसुन्यै गरेछन् । विनोद मल्लको घर कहाँ छ भन्दै हिँडेछन्,’ वडाध्यक्ष मल्लले भने,‘पहिलो पटक केटी भगाउन आएको बेला प्रहरी चौकी र्पुयाएको भन्दै विनोदसँग नवराज रिसाएका थिए ।
त्यसपछि गाउँलेहरूले ती युवाहरू झगडा गर्न आएको ठानेर लखेटेको वडाध्यक्ष मल्लले बताए ।
‘उनीहरू १९ जनामात्रै तर गाउँका १०० जना जति पुगेपछि उनीहरूको जोर चलेन अनि ज्यान जोगाउन भागेछन्,’ मल्लले भने ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रमुख डिएसपी ठगबहादुर केसीले जाजरकोटका युवालाई सोती गाउँका मानिसले कुटपिट गर्दै लखेटेपछि ज्यान जोगाउन भाग्दाभाग्दै नदीमा हाम फालेको बताए ।
‘गाउँले कुटपिट गर्न थालेपछि सबै भागाभाग गरे, सबै ज्यान जोगाउन लागे,’ डिएसपी केसीले भने ‘नदीमा हाम फालेकाहरूलाई समेत माथिबाट ढुंगामुढा भयो भन्ने बयान घाइतेहरूले दिएका छन् ।
गाउँलेहरूले लखेट्दै उनीहरूलाई नदी किनारसम्म र्पुयाए ।
पौडेर नदी पार गर्छु भन्नेहरूले भेरीमा हाम फाले । नसक्नेले आत्मसमर्पण गरेको डिएसपी केसीले बताए ।
‘नदीमा हाम फालेकाहरूमाथि पनि गाउँलेहरूले ढुंगाले हाने, पहिला नै घाइते भएका उनीहरू पौडिन सकेनन् होला,’ डिएसपी केसीले भने ।
प्रहरीले गाउँलेले बुझाएका १२ जनालाई जिल्ला अस्पताल ल्यायो। नदीमा हाम फालेका ७ जनाको खोजी सुरू र्गयो। राति १० बजेतिर भेरी किनारमा नवराजको शव फेला र्पयो।
उनको शव भेटिएको केही तल आइतबार बिहान टीकाराम सुनारको शव भेटियो । टीकारामको शव भेटिएको ठाउँबाट तीनरचार किलोमिटर तल सोमबार साँझ गणेश बुढा मगरको शव फेला परेको छ ।
१८ वर्षका लोकेन्द्र सुनार र सञ्जु बिक र १७ वर्षीय गोविन्द शाही अझै बेपत्ता छन् ।
नदीमा हाम फालेका एक जना भने पछि प्रहरीको सम्पर्कमा आएको डिएसपी केसीले जानकारी दिए ।
प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका १२ मध्ये १० जनाको अवस्था सामान्य छ । २ जना पनि जिल्ला अस्पताल चौरजहारीको उपचारपछि सोमबार डिस्चार्ड भइसकेको डिएसपी केसीले जानकारी दिए ।
घाइते युवाले आफू केटी लिन भनी रूकुम आएको भए पनि यस्तो होला भन्ने थाहा नभएको प्रहरीलाई बताएका छन् ।
‘हामी केटीको घर पुग्दा गाली गर्न थाले अनि गाउँले पनि आए त्यसपछि लखेटे अनि ज्यान जोगाउन भाग्ने काम भयो र त्यही क्रममा घेराबन्दी गरेर कुट्ने काम गरे,’ डिएसपी केसीले घाइते युवाको भनाइ उद्धृत गर्दै भने ‘लखेट्दै भेरीसम्म र्पुयाए अनि ज्यान जोगाउन कतिपय साथीले नदीमा हाम फालेका थिए ।